Puntland: Baarlamanka iyo xukuumadda oo guddiyo u saaray in la ogaado sababta keenaysa kufsiga dilku la socdo. – Kalfadhi
Puntland: Baarlamanka iyo xukuumadda oo guddiyo u saaray in la ogaado sababta keenaysa kufsiga dilku la socdo.
Deegaannada Puntland waxaa weli ka oogan xiisadda la xiriirta kufsiga sii kordhaya iyo sida sharcigu u wajahayo eedasanayaasha loo hayo falalka dhacay bilihii dhowayd qaarkood, iyadoo ay dadweynuhu shaki badan ka muujinayaan sida ay dowladdu u maaraynayso kiisaskaas oo qaarkood baaristooda raagtay.
Golaha wakiillada Puntland ayaa 14 abriil waxay guddi isku dhaf ah oo ka tirsan guddiga joogtada ah u saareen in ay baaris ku soo sameeyaan sababaha keenaya kufsiga sii kordhaya, gaar ahaan arrinta cusub ee ah kufsi iyo dil is wata.
Guddigaas isku-dhafka ah ayaa toddobaadkii hore sameeyay xog arruurin iyo baarritaano ay la yeesheen hay’adaha dowladda iyo kuwa kale ee u xilsaaran arrimaha xuquuqda asaasiga ah ee dadka, isla markaasna wax ka qabta tacadiyadan.
Weli guddiga joogtada ah ma aysan yeelan kulan kale oo ay ku soo bandhigaan warbixinta baarritaannada arrintaas la xiriira, sida ay Kalfadhi u xaqiijisay xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe, gudoomiyaha guddiga arrimaha haweenka iyo xuquuqda Aadanaha ee golaha wakiillada Puntland.
Docda kale, Madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shalay wareegto uu soo saaray wuxuu amray in si buuxda loo fuliyo xeerka kufsiga Puntland ee baarlamanku ansixiyay isla markaasna soo baxay 2016kii.
Fulinta arrintan ayaa madaxtooyadu u magcawday guddi ka kooban wasaaraddaha haweenka, cadaaladda, caafimaadka, taliyaha ciidanka booliska Puntland, Xeer-ilaaliyaha guud ee dowladda, taliyaha ciidanka danbi-baarista, guddoomiyaha Guddiga Xuuqda Aadanaha iyo guddiga sare ee Garsoorka.
Guddigan ayaa waxay ka shaqayn doonaan arrimo ay ka mid tahay Baarista haddii ay jiraan waxyaalo dhiiri-gelinaya ama cid ka danbeysa soo noq-noqoshada ficilka kufsiga ee dilku la socdo.
Arrimahan ayaa imanaya, xilli mudo laba bilood ah aan la shaacin natiijada baarista kiis kufsi iyo dil isugu jiray oo lagula kacay gabar 12 jir ah oo la yiraahdo Caasho Ilyaas, falkaas oo ka dhacay Galkacyo. Xeer Ilaaliyaha guud ee dowladda Maxamed Xasan Aw-cismaan wuxuu warbaahinta u sheegay in kiiskaas maxkamada Garowe laga furi doono toddobaadkan
Baaritaanno ay hay’adda foreensiga Puntland ku wadday tusaalayaal laga qaaday falkii dhacay ayaa natiijadooda toddobaadkii hore lagu wareejiyay hay’adaha kale ee baarista sida booliska, sida ay xeer ilaalintu sheegtay.
Xildhibaan Saynab Maxamed Caamir “Xuduudaha Soomaaliland waa lagu dhiiran waayay Warbixinta Guddiga maxay faa’iido leedahay”